ရဲတိုက် Builder II ကို |
Rabcat ယခုသူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရဲတိုက်ဆောက် slot ကဖို့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ဖော်ပြသထားပါတယ်, လြောကျပတျစှာ Castle Builder အမည်ရ slot ကနှင့်အတူ 2. ဒီဂိမ်းက၎င်း၏နောင်တော်၏ရန်အဆင့်မြှင့်ဖြစ်ဟု, နှင့်သိရပါတယ်, ပို. ပင်, သင့်ရဲ့ပေးချေမှုမြှင့်တင်ရန် features တွေ. သငျသညျနောက်ထပ်ဖတ်ပါနှင့်ဤ slot ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်.
အခမဲ့ဆုကြေးငွေ slot ကစက်အတွက်အဆောက်အဦး Castle အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
ရဲတိုက် Builder နှင့်အတူ2သင်မှာ .... ရှိသည်3အတန်း,5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 15 fixed paylines. သင်ဤနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ရ အခမဲ့ဆုကြေးငွေ slot က စက်ယန္တရား. ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကိုသငျသညျသုံးအဓိကဇာတ်ကောင်များအကြားရွေးချယ်ရာတွင်ပါဝငျသညျ. ဤရွေ့ကားဇာတ်ကောင်ဂိမ်းမူရင်းဗားရှင်းလည်းထင်ရှားတဲ့ခဲ့ကြသည်.
အစပိုင်းမှာ, သငျသညျနှစျခုဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကိုရွေးဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်, အမည်ရဆမ်နှင့်မန်ဒီ. ပထမဦးဆုံးအဆင့်အထိပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, တတိယတစ်ဦးချင်းစီထင်ရှားနေသည်. ပထမဦးဆုံးအဆင့်အထိခုနှစ်တွင်, သငျသညျအစကနေစတင်နိုင်ရန်တည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအဘယ်အရပ်ကစတင်ဆုံးဖြတ်ဘို့တစ်ဦးကမြေပုံပေးအပ်ပါလိမ့်မည်.
ဤသည် slot ကတစ်အုတ်များပါဝင်သည်အချို့နိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများရှိပါတယ်, နှမျးဖတျကြောကျ, slate နှင့်ကျောက်. high-တန်ဖိုးကို icon တွေကိုရွှေဘားပါဝင်သည်, သရဖူနှင့်တစ်ဦးဘဏ္ဍာကိုရင်ဘတ်. သင်သည်သင်၏ရဲတိုက်တည်ဆောက်ရသောမှာမြန်နှုန်းကိုသင်ကိုက်ညီ icon များနှင့်အတူဆင်းသက်ကြောင်း combo အနိုင်ရတဲ့၏နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်.
ရဲတိုက် Builder အတွက်2ယင်းတောရိုင်းသင်္ကေတဆမ်သို့မဟုတ်မန်ဒီတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုနေသည်. ဒါဟာသင်ကစားပွဲရဲ့အစကနေရှေးခယျြထားသောလူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်. ဘယ်ဟာကိုရိုင်းအိုင်ကွန်သငျသညျကို select, ကဆင်းသက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့အားလုံးကိုအခြားသင်္ကေတများကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်.
လွင်ပြင်ကိုအစားထိုးမရနိုငျသော reels ပေါ်တွင်သာသင်္ကေတ, အဆိုပါကြဲဖြန့်အိုင်ကွန်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဖြန့်ကြဲအိုင်ကွန်တစ်ခုပန်းရောင်အခမဲ့လည်အိုင်ကွန်အဖြစ်ကဒီမှာဖျောပွထား. သင်ဤ slot က၌သင်တို့၏ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းတွင်ပေါ်သည်ဟုသိသင့်. အဆိုပါ reels, သို့သော်ငြားလည်း, မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်လည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်.
ဒီအခမဲ့ဆုကြေးငွေ slot ကစက်နှင့်အတူ, သငျသညျဖြည့်ပါလိမ့်မယ် 8 သင့်ရဲ့ကစားမျက်နှာပြင်၏အနိမ့်ဘယ်ဘက်လက်ထောင့်ကိုတှေ့မွငျနိုငျသော Grid. သငျသညျ combo အနိုင်ရဆင်းသက်သောအခါဤအမှုကိုပြုဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Grid တက်ဖြည့်ခံကြသည်နှင့်အမျှ, သင့်ရဲ့ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးလည်းတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဇာတ်စင်မှာဖွစျလိမျ့မညျ. နှင့် 8 ဝပြောစွာ Grid, တစ်ဦးချင်းအဘို့သင့်ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးထို့နောက်ပြီးပြည့်စုံသည်.
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား site ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ဇာတ်ကောင်အဘို့အသေးသည်အခြားရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ. တစ်ဦးချင်းအဘို့ရှိသမျှကိုတတ်နိုင်သမျှရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်ပြီးတာနဲ့, သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်